Basa rezvemagariro - Zhejiang Lanhine Medical Zvigadzirwa Ltd.
Kwemakore mazhinji, kambani yakagara ichiisa kuvakwa kwechikwata chevashandi munzvimbo yakakosha, inonamatira kune vanhu-vanotungamira, uye inosimbisa kuchengetedzwa kwevanhu.
Yakagadzira mhuri hombe yevashandi vanobatana, vakuru, vane hanya uye vanobatsirana.
● Ipa nzvimbo yepamusoro yekushanda uye muhoro wakanaka uye hwaro hwehupfumi;
Teerera kune hunyanzvi kukura kwevashandi uye gadzira yakanaka nzvimbo yekukura;
Ipa rutsigiro rwekugadziriswa kwevashandi: kuchengetedzwa kwedzimba, hupenyu hwehupenyu, chikoro chevana mune zvetsika nemitambo zviitiko, nezvimwe.
Gadzira homwe yemubatanidzwa yekupa rubatsiro kune vashandi vari mumatambudziko avo vakatambura nezvirwere zvakakura kana kurasikirwa nehupfumi.
Lanhe Medical inonamatira kune "mutengi-centric" huzivi uye inosanganisa hunhu hwekuvimbika, kushuvira, uye mutoro kune vatengi vayo
Muhukama hwevatengi, funga nezve izvo vatengi vanofunga, kunetseka pamusoro peizvo vatengi vanonetseka nezvazvo, uye kunetseka pamusoro peizvo vatengi vanonetseka nezvazvo, uye shingairira kuva akavimbika mupiki!
● Kutaridzika kweMusika: Shingairira kudzidza zvinodiwa nevatengi uye nekuenderera mberi nekugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvemhando yepamusoro kugutsa vatengi;
● Kukosha kwekuvandudza: Uchishandisa zvakarongeka, zvakaenzana nzira dzeruzivo kupa vatengi zvigadzirwa zvitsva uye kuwedzera kukwikwidza.
Kubatsira nzanga uye kudzorera kusosaiti iro basa uye basa reBluehe Medical kwenguva yakareba. Kuita mabasa erudo ndiko
Mupiro webhizinesi kusosaiti zvakare isimba rekufambisa rekuti bhizinesi riwane kubudirira kusingaperi. Isu tinotora zviito zvinoshingairira kuvaka nzanga iri nani.
Tichaedza zvisingaite. Lanhe Medical anofarira uye ane hanya nezve zviitiko zvehupfumi, uye achisimbirira kuti "budiriro yemakambani inoenderana nesosaiti, uye nekambani
Pfungwa ye "kubudirira uye kudzokera munharaunda" inoreva kuti nepo kambani iri kuedza kusimukira, haikanganwe mabasa ayo ehukama. Kwemakore, zvave zvakadaro
Sangano renyika dzese rinotumira kudziya kune vanoshaya uye rinopa rutsigiro kune kuvaka kwemuno.
● Kuchengetedza magetsi uye kudzikisira kushandiswa: Kutarisana nekudana kwenyika, kuita simba rekuchengetedza pamwe nekuderedza kusvibiswa, kubvisa kugona kwechinyakare uye nzira dzinosvibisa nharaunda nemidziyo, nekusimudzira kugadzirwa kwakachena uye kuvaka bhizinesi rinogarisana nharaunda.
● Green office: Lanhe Medical inotsigira hofisi yemazuva ano uye yakagadzira akateedzana ehofisi software kutsiva kutaurirana kwakavakirwa pamapepa uye kusimudzira Matanho akaderera akadai sehofisi inopedza simba, hofisi isina mapepa, uye kushandisa marara, kusimudzira kuchengetedza-simba uye matanho ekuchengetedza ezvakatipoteredza, chengetedza zviwanikwa, uye chengetedza nharaunda. Dynamic inotarisirwa: Simbisa zvakatipoteredza kuchengetedzwa kuzviongorora, kuzviongorora-kuongorora uye kuongorora kwemukati, uye kuzadzisa zvakasikwa nharaunda, zvemagariro uye bhizinesi mabhenefiti Kukunda mamiriro
● Kukwidziridzwa kwekuchengetedzwa kwenzvimbo Ruzivo rwebhizinesi uye hunyanzvi.